Saddex mooshin ‘oo laga gudbiyey Kheyre oo fashilmay’ | SMC
Home WARARKA MAANTA Saddex mooshin ‘oo laga gudbiyey Kheyre oo fashilmay’
Saddex mooshin ‘oo laga gudbiyey Kheyre oo fashilmay’
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo hadal ka jeediyay kulankii maanta ee golaha ayaa ka dhawaajiyay ayaa shaaca ka qaaday saddex mooshin oo horey aan loo ogeyn oo ay ka gudbiyeen xukuumadda Kheyre balse fashilmay.
Mahad Salaad oo eedeymo dhawr ah oo uu u jeediyay guddoonka golaha, ayaa sheegay seddaxda mooshin oo ay ka keeneen la xisaabtanka xukuumadda, uu is hor taagay guddoomiye Maxamed Mursal.
Mahad Salaad waxa uu ku eedeeyey guddoomiyaasha baarlamaanka in ay xildhibaanada ka hortaaganyihiin la xisaabtayka xukuumadda, 3 mooshin oo isaga iyo xildhibaanno kale ay ugu yeerayeen wasiirro iyo mas’uuliyiin kale, si loola xisaabtamo su’aalana looga weydiiyo shaqada loo igmaday oo dayacan ayuu sheegay in guddoomiyuhu uu si cad u burburiyay golahana uusan hor keenin.
Xildhibaanka ayaa aad u dhaliilay shaqada Baarlamaanka, isagoo baarlamaankaan ku tilmaamay kii ugu liitay baarlamaanadii ka soo shaqeeyay dalkaan, isagoo dhaliilay kana dhawaajiyay sharciyo uu ansixiyay baarlamaankaan 10-aad, sharciyadaas oo uu ka mid yahay kii Banka Dhexe loogu ogolaaday in qof Ajanabi ah uu madax ka noqon karo.
Sidoo kale xeer hoosaadka xildhibaanada golaha shacabka oo sida uu sheegay liita ayuu guddoomiyaha Baarlamaanka kula taliyay in dib u habeyn lagu sameeyo.
Mahad Salaad ayaa dhamaan xildhibaanada ku eedeeyay in ay iska in dhatirayaan howlihii loo igmaday, isla markaana uu yaryahay xildhibaan dib ugu laabtay oo wax u qabtay dadkii soo doortay.
Waxa uu ku taliyay in lhnati-dhowraha qaranka looga yeero fadhiga golaha waxna laga weydiiyo warbixintii muujinaysay lacag badan oo maqan, isagoo quus ka muujiyay in taasi dhacdo tusaalana u soo qaatay guddigii maaliyadda golaha shacabka oo uu isagu ku jiray ee la kala diray markii ay ku dhiiradeen in ay ku dhaqaaqaan isla xisaabtan.
Previous articleXog: Meydadka ciidamo ka tirsan DF oo 3 maalmood ku go’doonsan Sh/Hoose
Next articleWadahadal lagu sii deynayo Shiikh Mukhtaar Roobow oo u socdo DF iyo Xisbiga Amni iyo Cadaalad